दैनिक ३५ सयका दरले बाहिरीने नेपालीका आ-आफ्ना फरक फरक दुःख छन्। यी सबै दुःखका जराहरू अन्तिममा आएर पैसासँग ठोकिन्छन्। हामी त्यसैले बाहिरिएका हौं। फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले ऊ बेला भनेका थिए रे- ‘पैसाको कुनै मातृभूमि हुँदैन।’ मातृभूमि नहुने यो पैसाको खोजीमा नेपालीहरू संसारका कुनाकुनामा पुगेका छन्।
आजका दिन ‘पैसा मात्र सबैथोक हो र?’ भन्न थाल्यौँ भने त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद बाहेक केही हुँदैन। बिकशित देशका विदेशीहरू पनि त नेपालमै आएर काम गरिरहेकै छन्। पैसाको पो मातृभूमि हुँदैन। मान्छेको त हुन्छ र संसारको जुन कुनामा पुगे पनि जन्मेको माटोको प्रेमले मान्छेलाई तानिरहन्छ। हो त्यसैले म नेपाल आइरहन्छु।
जन्मेको गाउँ, गोठ, पाखो, बारी हेरेर सुखी हुन नेपाल आइरहने नेपालीहरू मात्र छैनन्। विदेशमा कर्म गरेर सफल भएका नेपालीहरु पनि आइरहन चाहन्छन्। लगानी गर्न चाहन्छन्। लगानी गरिरहेका पनि छन्। यो सब जन्मेको माटो प्रतिको प्रेम हो, सुख हो। यसमा कुनै ‘फाइदाको गणित’ लागू हुँदैन।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान गेटनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्ने हो भने हाम्रो मुलुको सारा नक्सा देखिन्छ। आमाको गहना बैंकमा राखेर, साहुको ऋण टाउकोमा बोकेर गाउँठाउँमा बस्नै नसकेर खाडी मुलुकहरुको तातोमा पाक्न एयरपोर्टमा लाइन लागेका कसैलाई हामीले ‘देश छोडेर किन जान लागेको भनेर सोध्दैनौ। तर तिनै कामदार तीन महिनामा एक चोटी देश फर्कन थाले भने लज्जाबोध हुने गरि सोध्छौँ ‘किन आ’को?’
गएको २ महिनाअघि फ्लाई दुवईको फ्लाइट न. ५७५ बाट काठमाडौँ जाँदै थिएँ। छेउको सिटमा बसेकी थिइन् पूर्वकी एक जना तामाङ बहिनी। इजरायलबाट नेपाल फर्किदै थिइन्। उनी भन्थिन् ‘इजरायलमा अन्य नेपाली महिलाले जस्तो मैले दुःख भोगेकी छैन। मेरो इम्प्लोयर राम्रो छ।’ राम्रो काम भएकै कारण वर्षमा २ चोटी आउजाउ गर्न उनको इम्प्लोयरले प्लेन भाडा बेहोर्ने गर्छ।
‘तर नेपाल गइ रहन मन लाग्दैन। त्यसैले यस पाली २ वर्षमा मात्र फर्किएँ।’
‘काम गर्न विदेश पसेपछि स्वदेश आउनै हुँदैन जस्तो गर्छन्। यसको सुरूवात त एयरपोर्टबाटै हुन्छ। ‘लौ स्वागत छ। ६ महिनामा घर आउन पाउनुभयो’ कसैले भन्दैनन्। ‘किन ६-६ महिनामा आउने जाने गर्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्न सोधेर सास्ती दिन्छन्। आफ्नै घरमा पुगेपछि बुढा बाले समेत किन सधैँ नेपाल आउन पर्‍यो भनेर हैरान कटाउँछन्। मेरो बाध्यताले म बिदेश काम गर्न गएकी हुँ। मलाई देशमा आइरहन पाँउदा खुसी लाग्छ भन्ने कुरा कसैले बुझ्दैनन्। अनि किन आइरहनू ६-६ महिनामा?’
धरानबाट आर्टस पढ्न २००९ मा काठमाडौं झरेकी थिइन् उनी। पढाई राम्रो हुँदाहँदै जीवनको बाटो मोडियो। ‘गाउँ फर्कनुभन्दा विदेश जान्छु।’ भन्ने भूत सवार भएपछि इजरायल पुगेकी यी पढेलेखेकी बहिनीको तर्कमा दम थियो।
आफ्नो देशमा खुसी साट्न स्वदेश आउने नेपालीलाई हामीले ‘किन आको?’ भन्नु भन्दा ‘नेपालमा स्वागत छ’ भन्नुपर्ने होइन र?
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन १५, २०७४ ०२:१३:४१